जुम्लाको मार्सी चामल अब ‘नेपाल फुड’ - Dainik Nepal
जुम्लाको मार्सी चामल अब ‘नेपाल फुड’
दैनिक नेपाल २०७७ माघ १५ गते ७:३४
काठमाडौं, १५ माघ । जुम्लाको मार्सी चामल अब ‘नेपाल फुड’ ब्रान्ड बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नै मार्सीलाई ब्रान्डिङ गरेको हो । यसका लागि पहिलो चरणमा सुर्खेतबाट खरिद गरिएको २ सय ७० क्विन्टल मार्सी चामल काठमाडौं ल्याएर प्याकेजिङ भइरहेको कम्पनीका बिक्रीवितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले बताए ।
दोस्रो चरणमा कम्पनीले जुम्लाबाटै थप ३ हजार क्विन्टल मार्सी धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । ‘सुर्खेतबाट ल्याएको मार्सी चामल प्याकेजिङ भइरहेको छ । बिहीबारदेखि नै उपभोक्ताले किन्न पाउँछन् । यसको मूल्य प्रतिकिलो २ सय २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेका छौं,’ थापाले भने, ‘खाद्यले तोकेको मूल्य बजार भाउभन्दा धेरै सस्तो छ ।’
कम्पनीका अनुसार बजारमा एक किलो मार्सीको मूल्य २ सय ४० देखि २ सय ६० रुपैयाँसम्म पर्छ । सुर्खेतको बजारमै खुला प्रतिकिलो १ सय ८५ रुपैयाँमा खरिद गरेको खाद्यले ढुवानी, प्याकेजिङ खर्च, लोड–अनलोड, प्रशासनिक खर्चलगायत जोडेर खुद्रामा आफूले बेच्ने मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
‘फलाउनेलाई केही राहत होस् भनेर सुर्खेतका किसानसँग समन्वय गरेर पहिलो लट ल्यायौं,’ थापाले भने, ‘बिहीबारदेखि काठमाडौंको थापाथली, नक्खु, भक्तपुर, रामशाहपथ आउटलेटबाट बिक्री सुरु गर्छौं । बिक्री कक्ष नआई अनलाइनबाट किन्छु भन्नेलाई पनि डेलिभरी दिने व्यवस्था गरेका छौं ।’
दोस्रो चरणमा जुम्लाबाट धान खरिद गर्न कम्पनीले प्राथमिक खरिद समिति गठन भएको जनाएको छ । सरकारी प्रक्रियाअनुसार गठित समितिमा अध्यक्ष सम्बद्ध जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ । सदस्यमा खाद्य कम्पनी, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि कार्यालयले तोकेको कृषक र सम्बन्धित हुन्छन् ।
टोलीले स्थानीय उत्पादन, बजार मूल्य र सीमावर्ती दरभाउ विश्लेषण गरेर उचित मूल्य तोक्छ । जुम्लाको मार्सी धान खरिद गर्न प्रतिकिलो १ सय २ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । किसानहरूले चामल नै बिक्री गरे प्रतिकिलो १ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा निर्धारण भएको थापाले बताए ।
‘जुम्लाको मार्सी धान आइतबारदेखि खरिद हुन्छ । किसानहरूले चामल बिक्री गरे चामलै पनि खरिद गर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जुम्लामा खरिद गरिएको धान सुर्खेतमा प्रशोधन गर्छौं । जुम्लामा मिल भए त्यहीं पनि गर्न सकिन्छ, त्यसपछि उपत्यकामा बिक्री गर्छौं ।
तीन वर्षअघि आफ्नो घरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मार्सी चामलको भात खुवाएको भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको फोटो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । उक्त फोटो बाहिरिएपछि मार्सी चामलले निकै चर्चा पाएको थियो ।
निजी क्षेत्रका खाद्य व्यवसायी र फर्महरूलाई आकर्षित गरेको मार्सी चामल मुलुकका प्रमुख बजारका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट बिक्री सुरु भएको थियो । निजी क्षेत्रका फर्महरू अहिले पनि मार्सी चामल बिक्री गरिरहेका छन् ।
खाद्यले ढिला गरी मार्सी बिक्री गर्न थाल्नु सरकारकै प्रवर्द्धनको नीति अघि बढाएको जनाएको छ । जुम्लाबाटै मार्सी धान खरिद गर्नुको मुख्य उद्देश्य बजारीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ । मार्सी चामलसँगै खाद्यले कर्णालीको सिमी पुनः खरिदबिक्री गर्ने योजना पनि बनाएको छ । खाद्यले २०७४ सम्म सिमी, फापरलगायत गेडागुडी खरिद गर्दै आएको थियो ।
कर्णालीकै उत्पादन खरिद गर्न सरकारले अनुदानसमेत दिँदै आएको थियो तर खरिद गरिएको सिमी तथा फापर खाद्यले अपेक्षित परिमाणमा बिक्री गर्न सकेन । राजु चाैधरीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
कसरी बन्यो सरकार र चन्द समूहबीच वार्ताको वातावरण ?
संसद् प्रवेश गर्न खोप अनिवार्य
‘मलाई हटाए दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर पुनः फर्किन्छु’
संसद सचिवालयद्वारा ओली समूहलाई मान्यता, जिल परे प्रचण्ड–माधव र अग्नि
लमजुङमा किशोरीको महिनावारी रोकिएपछि खुल्यो पोल, युवक पक्राउ
तीन महिने आफ्नै छोराको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ
प्रचण्ड–माधव निकट सांसद चौधरी ‘जवज’को पक्षमा
सडकमै कसरी पुरिइन् महिला ?
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले हटायो संसदीय दलको नेता र उपनेतासहित ७ जना नेतालाई
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा चिडियाखानाको अवलोकन
काँग्रेस सभापति देउवाले लगाए कोरोनाविरुद्धको खोप
भागरथी हत्या आरोपितको चौथोपटक म्याद थप
प्रदेश नं १ काे प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते
ओपो एफ १९ प्रो सार्वजनिक हुने निश्चित, नेपालमा चाँडै सार्वजनिक गरिने घोषणा
विप्लव समूहसँगको दोस्रो चरणको वार्ता सहमति नजिक पुगेको भनाइ
आफताब आलमलाई छुटाउने प्रयास गरिरहेको छुः देउवा
प्रधानमन्त्रीको अफर आए तयार छु: सभापति देउवा